Elu mechie - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Dị iche iche Emechara
Enwere ihe karịrị 20 agwụla maka ọgwụgwọ elu, ọtụtụ dịgasị iche iche na-eme ka ị nwee ike ịhọrọ ma jikọta ya na ụzọ dị iche iche nke ọnụ ụzọ na oghere. "Ndị ahịa nwere ọtụtụ nhọrọ na nke a nwere ike imetụta ụzọ azụmaahịa na-adọta ma na-etolite isi ahịa ha, na-ewulite ndị ahịa dị elu ma na-eguzosi ike n'ihe ma na-emetụta ụzọ ndị mmadụ si eme mkpebi mkpebi." Anyị na-ebi n'ime oge oke nhọrọ.
Na mgbakwunye, iji mezuo ihe ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ụzọ na-eme, YALIS ejiri aka, ụzọ mkpọchi, ndị na-emechi ụzọ, a na-eme mkpọchi ọnụ ụzọ n'otu ngwụcha, nke na-eme ka akụrụngwa ọnụ ụzọ dịrịkwuo mma ma na-akwalite mma.
Oge nyocha YALIS na-agba agba nnu bụ ihe dị ka awa 96. Fọdụ ndị ahịa bi na mpaghara ala gbara osimiri okirikiri, ihu igwe dị jụụ na-achọ maka ọchịchọ dị elu maka iguzogide oxidation. Anyị nwekwara ike ịme oge nyocha nnu nnu karịa oge 200.